I-HTML5 neFirefox OS Online Course | Kusuka kuLinux
i-neysonv | | Izaziso
Sanibonani bafana, kuhle bengifuna nje ukunanela indaba yezindaba engisanda kuyifunda Muylinux.com futhi lokho Bheka u-X wenze umphakathi watholakala ngenkambo ye- I-HTML 5 neFirefox OS ifundiswa ngoprofesa be- Universidad Politecnica de Madrid.
Inkambo ingenziwa kusuka ku-Ubuntu, noma ngenxa yamathuluzi abawasebenzisayo kungenzeka ngokuphelele kunoma iyiphi enye i-distro.
Kunconyiwe kepha akubalulekile, ulwazi oluncane lokuhlela kanye ne-Android Smartphone, i-iPhone, i-iPad noma iFirefox OS. Imininingwane eminingi lapha.
Kubukeka kubalulekile ukugqamisa ifilosofi yale nkundla, ngakho-ke bheka isixhumanisi esedlule ngoba iqiniso ukuthi le nkundla ibukeka kahle kakhulu, yize kufanele ngithi kungokokuqala ukuthi ngenze isifundo ngayo.
Futhi akukho lutho bafana, sheshani ngoba isikhathi sokubhalisa siphela ngoNovemba 11 futhi ngalesi sikhathi anginasiqiniseko sokuthi kungenzeka yini ukubhalisa ngosuku olulandelayo.
Kufanele nje ukubhalisa ekhasini bese ubhalisela isifundo ngenkinobho ephephuli leli khasi njengoba kukhonjisiwe kusikrini sokuqala se-athikili.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Inkambo eku-inthanethi ye-HTML5 neFirefox OS
Ngibhalise izolo. Ngiyethemba ukuthi ngingawadlula wonke amamojula ngaphandle kwezinkinga 😀
BTW .. JS nge logo? Lokho kusungulwe ngamaShayina .. 😀
Kade ngangibona leyo logo kuwebhu isikhathi esithile xD
Ngicabanga ukuthi ngifunda naye ekilasini «HAHAHAHAHA»: 3
Yebo, ngicabanga ukuthi sengivele ngiyingxenye yabafundi "be-zillion" esifundweni futhi ngiyethemba ukuthola isikhathi phakathi kwamakilasi ami nomsebenzi wami wokufeza lezi zifundo. Ngakho-ke ngilinde ukubona ukuthi ngubani engingamthola lapho
Ngangivele ngibhalisile ezinsukwini ezedlule, kuleyo nkambo nakwabanye kuleyo webhusayithi.
Ngicabanga ukuthi kuzoba wuhlelo naloluhlu ngoba uma kunjalo, kungakuhle ukubhala i-athikili etshela okuhlangenwe nakho kwakho, ngokombono womsebenzisi we-Linux. Kungokokuqala ngqa ukuthi ngibhalise ngakho angikwazi ukusho ukuthi izifundo zinjani
Ngibhalisile futhi, ukubona ukuthi amamojula anjani 😛
Umbuzo, Ingabe izifundo zizokwenziwa ngamavidiyo achazayo?
Ngibhalisile, kepha njengamanje anginaso isikhathi sokufunda. Ezinyangeni ezi-2 ngizoba nesikhathi. Ngabe amakilasi wangaphambilini ezifundo azotholakala noma azovalwa unomphela?
Ngethemba ukuthi othile uzolayisha amavidiyo enkambo ku-Youtube noma kwiMediagoblin.
ngakho-ke ngibona amavidiyo nama-pdf kodwa konke kuqoshwe ekhasini. Engingakwaziyo ukuthi ngabe okubhaliwe kuzotholakala ngemuva kokuphothula izifundo.
Hlela, ukubona ukuthi ngithola yini isikhathi 🙂
Kubhalisiwe ukuthi leplatifomu iyamangalisa.Ngithemba ukuthi yindlela abasitshela ngayo.
Ilinde inkambo ukuthi iqale: D!
Bangaki bethu abasebenzisa i-linux esizobhaliswa ngabo? Siyabonga ku-neysonv…
Ngiqedile imodyuli engu-0 neyoku-1 ngiphuthelwa umsebenzi ophoqelelwe wemojuli 2 kepha ngiwushiye ngoba bekuvele kusebusuku, ngiyethemba nokuwuqeda, ngihlala ngiqala kahle bese ngiyishiya: c lol
Haha ngenkathi ividiyo yesifundo iqala ngangiyi-WTF! Yenzani leyo logo lapho?
Lesi sifundo sibi kakhulu, sihleleke kahle kodwa othisha bangama-dinosaurs. Kuyinkambo ye-HTML, bakufundisa imizuzu eyi-10 yokulayisha ifayela kuGoogle Drayivu futhi uma kukhulunywa nge-HTML ne-CSS bayeqa izinto noma bathuthukise izinto ngaphandle kwenzalo. Ku-Hangout ye-developloweb.com ufunda kabanzi.
Kuyinkambo yabaqalayo, abakusho konke kepha bazokwanda esifundweni esilandelayo. Mhlawumbe ku-Desarrolloweb.com kunemininingwane engcono kepha uma ungazizwa unesibopho sokuletha umsebenzi, uhlehlisa izinto futhi ekugcineni ukufunda kubambezelekile. lowo ngumehluko phakathi kokuthatha isifundo nokufunda nje online
Nayi enye inkambo yevidiyo ye-HTML enhle kakhulu:
Kuchazwe kahle kakhulu, kusukela ekuqaleni nangezibonelo ezinhle.
Lungisa Ubuntu: Nakekela ubumfihlo bakho